इलेक्ट्रोनिक्स, कम्युनिकेशन एण्ड इन्फरमेशन इन्जिनियरिङ पढ्नेले सिधै काम पाउँछ
प्रा.डा. दिनेशकुमार शर्मा, सल्लाहकार (काठमाडौं इन्जिनियरिङ कलेज–केईसी)
२०७५ असोज १२ शुक्रबार १७:००:००
केईसीमा हाल कुन–कुन विषय पढाइ हुन्छ ? आकर्षण कुन विषयतर्फ बढ्दो छ ?
केईसीमा अहिले पढाइ हुने विषयहरु भनेको सिभिल इन्जिनियरिङ, आर्किटेक्चर, इलेक्ट्रोनिक्स, कम्युनिकेसन एण्ड इन्फरमेशन इन्जिनियरिङ र इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ नै हो । विषयहरु धेरै रहेपनि आकर्षणचाहिँ लामो समयदेखि नै सिभिल इन्जिनियरिङ र कम्प्युटर इन्जिनियरिङतर्फ नै बढी छ ।
आर्किटेक्चरको आकर्षण विदेश र भारतमा पनि हाल बढ्दो देखिन्छ, नेपालमा कस्तो छ ?
आर्किटेक्चर अलिकति आर्ट पनि भएकोले त्यको आकर्षण धेरै त छैन । तर विस्तारै बढ्दै छ । नेपालमा विगत लामो समयदेखि नै विद्यार्थी धेरै हुने र बजारको माग भनेको सिभिल र कम्प्युटर इन्जिनियरिङतर्फ नै छ ।
इलेक्ट्रोनिक्स, कम्युनिकेशन एण्ड इन्फरमेशन इन्जिनियरिङ कस्तो विषय हो ? नयाँ विषयको खाँचो किन ?
इलेक्ट्रोनिक्स, कम्युनिकेशन एण्ड इन्फरमेशन इन्जिनियरिङ भनेर हामीले नयाँ सुरु गरेका छौं । यो इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानले कम्प्युटर इन्जिनियरिङभन्दा पनि अगाडि नै सुरु गरेको प्रोग्राम हो । तर संस्थानले विस्तारै समयको मागअनुसार करिकुलममा परिमार्जन गर्न सकेन भने मार्केटको डिमाण्ड कम्प्युटरतिर धेरै नै गयो । इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड कम्युनिकेसन इन्जिनियरिङ भनेर डिमाण्ड मार्केटमा बढ्दो छ । त्यही भएर संस्थानले इलेक्ट्रोनिक्सतर्फ पनि विद्यार्थीहरुको चाहना बढोस् भनेर यसलाई परिमार्जन गरेर यसै वर्षदेखि संस्थानले र हामीले पनि सुरु गरेका छौं ।
संसारमै इन्जिनियरिङप्रतिको चाहना घटिरहेको छ । त्यसमा पनि जब अपच्र्युनिटी सिभिल र कम्प्युटरमा बढी देखियो । त्यही भएर पनि नयाँ प्रोगाम ल्यायौं । यसमा अध्ययनरत एउटा विद्यार्थीले इलेक्ट्रोनिक्स पनि पढ्छ, कम्युनिकेशन र कम्प्युटर इनिजिनियरिङको कोर्ष पनि पढ्छ अनि मार्केटमा सिधै जब पाउन सक्छ भनेर नै परिमार्जन गरिएको हो ।
पहिलो वर्षमा विद्यार्थी भर्नाको अवस्था कस्तो रह्यो ?
भर्नाको अन्तिम समयमा गएर बल्ल परिमार्जन हुन पुग्यो । त्यसैले धेरै विद्यार्थीले थाहा नै पाएनन् । बजारमा पनि यस विषयबारे अलि प्रचार गर्न पनि सकिएन । त्यसैले यसपटक खासै विद्यार्थी ल्याउन नसकिएका हो, तर अर्को वर्ष पक्कै विद्यार्थी बढ्छन् ।
यस वर्ष इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानले कति विद्यार्थीको नाम निकाल्यो, क्षमताभन्दा कम विदार्थी भर्ना भए, होइन ?
यसपालि संस्थानले भर्नाको लागि जम्मा ६ हजार ३५० नाम निकाल्यो । झण्डै ११ हजारले निवेदन दिएका थिए । त्यसमध्ये पनि २ हजारजति भर्नाका लागि आएनन् । ती पहिले नै भारत गइसकेको हुन सक्छ । संस्थानको क्याम्पस र निजी क्षेत्रको गरेर ४ हजार २ सय क्षमता छ विद्यार्थी भर्नाको तर विद्यार्थी जम्मा ४ हजारमात्र देखिए । यसपटक क्षमताभन्दा कम विद्यार्थी भर्ना भएको पक्का हो ।
नाम निकाल्न नसकेको र बाहिर गएर पढ्नुपर्ने विद्यार्थीको अवस्थाबारेमा संस्थानले के गर्दैछ ?
यस विषयमा इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानले गहन विचार गर्ला । किनभने ११ हजारले निवेदन दिएकोमा ६ हजारलाई मात्रै स्वीकृत गर्यौं र बाँकी ५ हजार विद्यार्थी कि त विदेश पढ्न गए कि यहीँका अन्यमा विश्वविद्यालयमा पढ्ने भए । इन्जिनियरिङ संस्थानमा चाहिँ पढ्न नपाउने र त्यही विद्यार्थी बाहिर पढ्न जाने अवस्था आयो । यसमा संस्थानले केही विचार गर्दैहोला ।
इन्जिनियरिङमा महिलाको आकर्षण कस्तो छ ? केईसीले के सुविधा उपलब्ध गराएको छ ?
महिलाको आकर्षण एकदमै बढ्दै छ । हामीले १० प्रतिशत महिलाले स्वतः भर्ना पाउने कोटा छुट्याएका छौं । १० प्रतिशतले प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्दैन । छात्रवृति त मेरिटका अनुसार मात्रै पाउँछन् ।
केईसीबाट पास भएका विद्यार्थीले अवसर पाउने अवस्था कस्तो छ ?
हाम्रो क्वालिटी धेरै नै राम्रो छ । पढाइ सकेका र डिग्री पाइसकेकाले खाली हात बस्नुपरेको छैन । सबै काममै छन् । केईसीमात्रै होइन, अन्य विश्वविद्यालय र कलेजबाट पढेका ग्राजुएटले यस क्षेत्रमा काम पाइरहेकै छन् ।